Mikarakara tarehy ve ianao isan�andro?
Archives	Nous contacter A la Une
Reny maodely, mpandraharaha matihanina
Anisan�ireo vehivavy mpandraharaha tena be herim-po Razakanavalona Bakoly, tompon�ny Poissonnerie Manda ( anaran-janany), orinasa iray mpikirakira ny resaka hazan-dranomasina eto amintsika. Ny taona 1995 no niaingany voalohany tamin�io sehatra io ary mbola iainany sy ivelomany mandraka androany. Anisan�ny nanampy azy betsaka tamin�izany ny mahazanaka mpanarato azy...
Lire la suite...	Fenotiana 17 taona : mitantara ny fahafaham-barakany voalohany
Tadidiko tsara, journ�e des �coles tamin�izay.
Lire la suite...	� Gel douche intime �, tena ilaina ve ?
Faritra tena saro-pady eo amin�ny vehivavy ny fivaviana, ka tokony ho ara-dal�na ny hadiony. Mbola maro amintsika vehivavy anefa no misalasala amin�ny fomba fisasa tena mety. Inona marina no antony liana ireny �gel intime� ireny ?
Lire la suite...	Inona no mahasorena anao indrindra amin�ny toetran�ny vehivavy ?
Lire la suite...	Tokony hiera amin�ny lehilahy ve ny vehivavy raha hanova zavatra amin�ny vatany ?
Lire la suite...	Mitsena azy isan�andro any am-piasany, mety ve?
Lire la suite...	Face � face
Efa nahavanon-doza noho ny fitiavana ve ianao ? Tantarao !
20/08/2013 Ony, 21 taona : Tsia, rehefa manao maquillage fotsiny aho no mampiasa démaquillant fa tsy mahavatra aho. Mamanay koa miteny fa mbola aloha loatra izao raha hikitika tarehy aho dia avelako amin’izao aloha. Karena, 28 taona: Ie, tsy maintsy manao izany aho satria efa be loatra ny loto eto an-drenivohitra. Rehefa mody amin’ny hariva surtout, tsy maintsy diovina ny tarehy fa mipetaka eny avokoa ny setroka, ny hatsembohana. Na dia tsy hanosotra produit aza aho dia manasa tarehy tsara fotsiny amin’ny hariva. Miora, 34 taona : ilaina ilay izy dia manao aho fa indraindray tsy mahavatra. Rehefa malalaka aho dia manamboatra fanadiovana tarehy na masque natoraly amin’ny tarehy. Amin’ny andavanandro dia manadio tarehy sy manosotra crème de jour no tena fahazarako. Rinahsoa <<Retour	Copyright 2009 Jejoo